Yemahara software ye Photoreading. Shandisa nzira iyi paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Yemahara software ye Photoreading. Shandisa yakakurumidza kudzidza nzira neLinux
Kutora mifananidzo Ndicho kukurumidza kudzidza maitiro. Vanoti kana zvipo zvikawanda nyangwe musande anovhiringidzika. Uye, kana iwe ukaverenga mhedzisiro inovimbiswa nemunyori mubhuku rake, pasina kupokana, unenge uchinyumwa. Zvisinei, kuyedza kuri mahara, uye cparubatsiro rweaya akavhurwa sosi zvirongwa kuzviita zvakare zvakareruka.
Ini pachangu, kunyangwe ini ndisina kumbowana mhedzisiro yakavimbiswa, ini ndinoona izvo mushure mekuishandisa Ini ndinoona zviri nyore kwazvo kunzwisisa chinyorwa. Mukururama, kushomeka kwakakwana kwekubudirira kunogona kunge kuri nekuda kwekuona kwangu kwakanyanya uye nzira yacho inoda kukwanisa kuona chinyorwa kure. Kune rimwe divi, vashori varo vanochengetedza kuti ndizvo iyo yekutanga uye post maitiro ku Photoreading uyo anowana mhedzisiro
1 Mahara Software ekuMifananidzo Kuverenga
1.1 Matanho e Photoreading
Mahara Software ekuMifananidzo Kuverenga
Ngatitangei pakutanga. Nedudziro ye Photoreading. Isu tese (zvirinani kuMadokero) takaverenga zvakafanana, kubva kuruboshwe kuenda kurudyi uye kumusoro kusvika pasi. Kana iwe ukatora kosi yekuverenga nekukurumidza, iwe unenge wave kudzidza iyo pfungwa ye "Kugadziridza mapatani". Zano ndere kumira kutarisa kuzwi rimwe nerimwe uye tarisa pasi peji uchirega ziso richibata zvirimo.
Photoreading inotopfuura. Inochengetedza izvo huropi hwemunhu hunogona kuisa zvirimo mune peji nekungotarisa kwaro kwechipiri. Kune izvi, nzira yacho inoshandisa preconscious kugadzirisa uye subliminal kuona. Ehe chinhu chacho hachisi nyore kwazvo. ndinoziva inoda maitiro kune iro ruzivo rwakadzika mukati mehuropi kumusoro.
Zvinonakidza kuziva kuti akaigadzira sei, chipangamazano-mu-kudzidzisa anonzi Paul Scheele, akapedzisira agadzira nzira yaanoti inogona kuverenga 25000 mazwi paminiti.
Scheele vaive nematambudziko ekunzwisisa kuverenga uye izvo zvakamutungamira kuti atevere makosi akasiyana ekuverenga nekukurumidza Kutaura nehunyanzvi, aifarira zvitsva zvakawanikwa pamusoro pekuti isu vanhu tinodzidza sei ndokuguma ndichigadzira nzira.
Ehe murume haamhanye sangano rerubatsiro. Kubhadharisa bhuku racho, makosi uye zvimwe zvinhu. Asi, kana iwe uchiziva kwekutarisa pane internet unogona kuwana zvese zvaunoda kushandisa nzira yacho mahara.
Nezve kubatsira kwayo, handigone kupupura kuti mhedzisiro yakavimbiswa ichawanikwa. Basa iro raizonditorera kuti ndigadzirise chinyorwa hombe kuti ndikwanise kurira-kurira rakakura kupfuura zvarinotora kushandisa chinyakare kudzidza nzira. Ini ndinodzokororazve kuti uku kuperera kwekutadza kuona kwangu.
Zvisinei, mamwe matanho ehunyanzvi akafanana kune iya yemamwe akawanda matekinoroji ekudzidza ayo zvakaratidzwa kuti zvinoshanda, saka kana iwe ukafunga kuyedza nzira, hautambise nguva.
Matanho e Photoreading
Iyo Photo-kuverenga nzira ine anotevera matanho:
1) Kugadzirira: Buda pachena nezve zvatiri kuda kuita nezvinhu zvatiri kuzodzidza. Isu tinodawo zvirongwa zvinotibvumidza isu kuverenga zvinyorwa. Kana ivo vari muEpub formpat isu tinofanirwa shandisa gauge. Kana zviri zvemagwaro ari pdf fomati, zvese zvinogoverwa zveLinux zvinosanganisira akakodzera muoni aine mukana wekuzviona zvizere skrini.
2) Kuverenga kwakapfuura: Iyi nhanho ndeyekuzviziva iwe nezvakanyorwa uye nemabatirwo ayo. Sezvo isu pamwe tichishanda nemagwaro akaongororwa imwe nzira yekubvisa izvo zvikamu zvemavara zvatisingade. Panguva ino, zvishandiso zvinotibvumidza isu kugadzirisa pdf zvinyorwa senge Xournal ++, PDFsam o pdftk.
3) Kuverenga mifananidzo: Iyi ndiyo nhanho panoitika "chishamiso". Apa ndipo apo uropi hwedu huchagadzirisa ruzivo kubva kumavara padanho rekuziva. Chaizvoizvo zviri nezve ziso redu kuwona iro peji rese kwechipiri. Izvi zvinogona kuitwa nehurongwa hwekuratidzira senge LibreOffice Impress kana avo vataurwa pamusoro pdf vataridzi.
4) Kumisikidza: Isu tatova neruzivo mupfungwa dzedu dzisingazivikanwe. Iye zvino tinoda kuenda nayo kunzvimbo kwayinotibatsira. Izvo zvinokurudzirwa ndezvekuti imwe nguva mushure mekuverenga foto isu titangise zvekare iwo mavara tichirega maziso edu achimhanya kuburikidza nerugwaro uye achimira munzvimbo idzo dzatinonzwa kudiwa kwekuzviita. Izvo zvinobatsira patinoverenga kugadzira mepu yemepu nemidziyo yakadai se Wona Pfungwa Dzako o Freemind.
5) Kuverenga kwekupedzisira: Mune ino nhanho isu tinoverenga kuti isu tinowanzo zviita sei. Tinogona kuenda nekukurumidza mune izvo zvikamu zvisina basa kwatiri uye zvishoma nezvishoma mune izvo zvatinoona zvinonakidza kana zvishoma kuomarara kunzwisisa.
In the inotevera isu tichaona zvakanyanya kuwanda nhanho dzakasiyana uye kushandiswa kwezvirongwa zvakasiyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Yemahara software ye Photoreading. Shandisa yakakurumidza kudzidza nzira neLinux
Ini ndinofunga ndizvo chaizvo zvatinoita kana tichiverenga kodhi.
Ini handizviverenge zvakadzama, ini ndinokurumidza kuona uye huropi hwangu hunoenderera zvinotaurwa nekodhi "inoda kutaura"
Chikumbiro chakanakisa mepu zvinyorwa uye mazano.
Chinyorwa chakanaka. Ini ndakamirira kuenderera.
Kutenda neruzivo uye nekutaura
Mumwe mutsigiri we "kukurumidza kuverenga" pseudoscience. Pamwe munyori haana kuyedza nzira iyi uye anonyora kubva mukunzwa asingazive kana mumwe muimbi anotengesa bhasikoro.
Wakaverenga here chinyorwa? Ini ndinotanga nekutaura kuti chii chaive chiitiko changu nehunyanzvi uye zvinotaurwa nevaya vasingatendi mazviri.
Muchokwadi ndiwo mumwe weiyo mienzaniso iyo munyori anopa mubhuku rake. Ndatenda nekutaura
Ndapota. Imwe "bullshit" yakawanda, sezvaive "multitasking."
Mazwi 25000 paminiti… ha. Kana iwe uchikwanisa kunzwisisa mumwe munhu anotaura nemakumi maviri neshanu mazwi paminiti, ipapo ungatenda kuti unokwanisa kunzwisisa izvo zvaunoverenga pamashoko zviuru makumi maviri nezvishanu paminiti.
Kunyangwe iwe uchikurumidza sei kuti iwe unoti iwe uverenge, pfungwa ine yekumhanyisa muganho wekusanganisa (uye ini ndinotaura nezvekusanganisa, kwete kurangarira kuita chihwenga).
PS: Ini handisi kutaura nemunyori wenyaya. Iyi ingori nzira yekuzviratidza.
Muchiitiko chakaipisisa, chinhu chega chakarasika inguva yakapihwa kuverenga kweMifananidzo, zvimwe zvese zvakafanana nechero imwe nzira yechinyakare yekudzidza. Ndatenda nekutaura
Icho chimwe chevanozivikanwa mazita ekunyepedzera. Izvo hazvigoneke panyama iwe paunotarisa pazviri. Pasina kutaura kuti ziso redu rinotarisa uye rinotarisisa kune rakaenzana nepamusoro zvigunwe zviviri zvinoonekwa nemaoko akatambanudzwa.
Yakanakisa emahara emavhidhiyo mitambo yeGNU / Linux
Iyo nyowani vhezheni yeSailfish OS 3.2.1 yakatoburitswa uye ndidzo shanduko dzakakosha kwazvo